चप्पले बर्षमान, ओनसरी: अर्थमान र धनसरी बनेको युग ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	चप्पले बर्षमान, ओनसरी: अर्थमान र धनसरी बनेको युग ? » Nepal Fusion
चप्पले बर्षमान, ओनसरी: अर्थमान र धनसरी बनेको युग ?
दस बर्षे जनयुद्धको प्रतिफल के, धेरैकाे याे प्रश्न अहिले पनि छ। म त भन्छु, बर्षमान पुन र अाेनसरी घर्ती नै उदाहरण हुन्। सहयोद्धाहरुको रगत र पसिनाको प्रतिफल रे! त्यही भएर त आज स्याल दरबारमा बसेर राज्यलाई भैँसीको सिनो संम्झे झै लुछेरहेका छन। युद्धताका सहयोध्दाहरुले राम्रो स्याहार-सुसार र अौषधिमुलोकाे उचित व्यवस्था मिलाईदिए र अाज अारामदाही जीवन बिताईरहेका छन्।
यीनीहरुले जनयुद्धकाे नाममा, धनयुद्ध गरेको अाभास भैरहन्छ। जनताका सुन्दर सपना र अांस्थालाई कुल्चिने अर्थमान र धनसरीलाइ राेल्पाले कसरी साथ दिईरहेकाे। हुन त रोल्पा ससुराली जिल्ला हो, अक्षिशित भनौ भने, नातेदारहरु म भन्दा शिक्षित छन। यस्ता भ्रष्टका अखडाहरुले कसरी साथ पाएका छन्, कुन्नि? म अाशार्य चकित परेको छु।
बिगतको दुर्दशा र अहिलेको सानदार जिवनशैली, नेपाली चर्चित उखान : फुपुको धनमा मामाको श्रद्दा भनेझै राज चलेकै छ। आफ्नो के जान्छ र ? हामी गरिब जनताबाट उठाएकाे करले अाफ्नाे जीवनयापन बदलिँएकै छ। हिजोका चप्पले नेताहरुले देश नै खाए कठै, अब जनता जागेर यस्ता भ्रष्टहरुबाट समाजले मुक्ति पाउनुपर्छ।
जय राष्ट्रबाद : जय स्वाभिमान- बिचारक एेडीकाे साप्ताहिक स्तम्भ हाे। याे उनको निजि बिचार हाे।